तरुनीले ४० प्रतिशत देखाउँदा केटा भुतुक्क&#237 - Beauty & Fashion - Bridge to Nepal & Nepali
Topic: तरुनीले ४० प्रतिशत देखाउँदा केटा भुतुक्कí
Author Topic: तरुनीले ४० प्रतिशत देखाउँदा केटा भुतुक्कí (Read 1034 times)
तरुनीले ४० प्रतिशत देखाउँदा केटा भुतुक्कí
« on: November 24, 2009, 11:32:50 AM »
केटालाई आकर्षित गर्न तरुनीले शरीरको ४० प्रतिशत भाग देखाउनु पर्नै विज्ञहरूले बताएका छन् । कति शरीर छोप्ने अनि कति शरीर देखाउने भनेर महिलाहरू अन्यौलमा रहको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी एक अध्ययन गरिएको थियो । जसको नतीजा अनुसार विज्ञले ४० प्रतिशत शरीर खुल्ला राख्न सुझाएका हुन् ।
तपाई पुरुष हुनुहुन्छ भने एउटा प्रश्न- तपाई महिलाले शरीरको कति भाग खुल्ला राखुन् भन्ने चाहनुहुन्छ? लौ ठिक छ । अनि महिला हुनुहुन्छ भने पनि सोधिहालु न है – कति शरीर देखाउने भनेर कहिले काँहि साह्रो गाह्रो परेको छ? पक्कै पनि परेको हुनुपर्छ । यस्तै समस्यालाई ध्यानमा राख्दै एक अनुसन्धान गरिएको छ । जस अनुसार केटालाई आकर्षित गर्न तरुनीले शरीरको ४० प्रतिशत भाग देखाउनु पर्नै विज्ञहरूले बताएका छन् । कति शरीर छोप्ने अनि कति शरीर देखाउने भनेर महिलाहरू अन्यौलमा रहको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी एक अध्ययन गरिएको थियो । यहि अनुसन्धानको नतीजा अनुसार विज्ञले ४० प्रतिशत शरीर खुल्ला राख्न सुझाएका हुन् ।
अनुसन्धान युनिभर्सिटी अफ लिड्सका शोधकर्ताहरुले गरेका हुन् । शोधका क्रममा विशेषज्ञहरु एउटा प्रसिद्ध नाइट क्लब पुगेर त्यहाँको घटनाक्रमलाई नियालेका थिए । नाइटक्लबको बाल्कोनीमा बसेर दृश्य हेर्दै र खिच्दै गर्दा के देखियो त थाहा छ तपाईलाई?
केटाहरू शरीरलाई लुगाले छोपेर नाइटक्लब आएका युवती भन्दा दोब्बर बढी पटक शरीरको ४० प्रतिशत देखाएका युवतीलाई नाच्नको लागि आग्रह गरे । छैन त कुरा गजब । अनि अर्को कुरा शरीरको धेरै भाग खुल्लम खुल्ला देखाउने केटीलाई भने केटाहरुले विश्वास गर्न सकेनन् । अनि उनीहरू पछि परे । याद गर्नुस् है धेरै देखाउनु पनि हुँदो रहेनछ ।
अनुसन्धानकर्ता कलिन हेन्ड्री भन्छन् –" शोध अनुसार हामी तरुनीलाई ४० प्रतिशत शरीर देखाउन सल्लाह दिन्छौ ताकि केटाहरू मजैले आकर्षित होउन् ।"
अनुसन्धानको क्रममा देखिए अनुसार ४० प्रतिशत शरीर प्रदर्शन गर्ने तरुनीलाई चालीसै केटाहरु नाच्नलाई आग्रह गरे । यो मंसिरको महिना यसो भोज भतेरको चाँजो पाँजो त मिल्छ नै । तर लुगा लगाउँदा यो चालिसे सुत्र चाँहि नबिर्सनुहोला । मेरो सुझाब यत्ति ।
Re: तरुनीले ४० प्रतिशत देखाउँदा केटा भुतुक्कí
« Reply #1 on: November 24, 2009, 12:13:33 PM »
aaba chai kt harulai sajilo parni bhayo ni ta
« Reply #2 on: November 25, 2009, 08:30:43 PM »
kura sacho chha hehe
« Reply #3 on: November 26, 2009, 07:06:46 PM »
40% aarey naughty terai din cha
« Reply #4 on: April 02, 2010, 10:09:46 AM »
thikka dekhayeko matra wastab ma attractive huncha ni ta haina ?